हमालहरुको कमाल - Sankalpa Khabar
२३ आश्विन १०:२५
काठमाण्डौं । ८८ दिनमा सरकारले पुर्णता पायो । मन्त्रीपरिषद विस्तार ढिलाइ हुनुमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको जति दोष छ,त्यो भन्दा बढीगठवन्धनको दोष छ । साच्चै भन्ने हो भने यो दोष केपी ओलीको हो । पार्टी फुटेपछि निर्वाचन आयोगले दिएको फैसलालाइ महत्व नदिइ उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नै करिव ७० दिन लगायो । पार्टीको आधिकारिकताको टुंगो नलगाइ माधव नेपालको दल सरकारमा जाने सम्भावना थिएन । र,माधव नेपाललाइ छाडेर सरकार वनाउदा गठवन्धन मिलेको सन्देश जाने थिएन ।यसकारण माधव नेपाललाइ कुर्दा ८८ दिन लाग्यो । तर,गैरसांसदलाइ मन्त्री वनाउनुपर्ने के खण्ड कांग्रेसलाइ आइपरयो ? वाँकेका स्थानीय नेता गजेन्द्रवहादुर हमाल कांग्रेसकै पुराना सदस्य हुन । अझ भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेस विभाजन हुदा शेरवहादुर देउवालाइ साथ दिएका नेता हुन गजेन्द्र हमाल । वाँकेमा सुशील कोइरालासंग मत वाझिएपछि उनी प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको जिल्ला सभापति भए । अर्थात देउवासंग उनको पुरानो साइनो र सम्वन्ध हो । तर,आज न उनी सांसद हुन,न केन्द्रिय राजनीतिमा उनको ठुलो योगदान नै छ । तैपनि संघिय सरकारमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री हुने उनको योग्यता के हो ? र,सरकारलाइ उनको आवश्यकता किन परेको हो ? यो प्रश्नले अहिले कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाइ सताइरहेको छ ।
करिव तिन महिना पहिला पनि देउवाल यसै गरेका थिए । उनले गठवन्धन सरकार भएपनि कसैलाइ थाहै नदिइ सुटुक्क स्वास्थ्यराज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाइ वनाएपछि आलोचनाको तारो वनेका थिए । तर,जुन दिन देउवाले मन्त्रीपरिषदविस्तार गरे सोही दिन उनले करिव तिन महिने सरकार वसाइ टुंग्याए । चौतर्फी आलोचना हुदा र स्वार्थ वाझिने मानिसलाइ किन मन्त्री वनाएको भनेर भन्दा समेत अब यसो गर्दिन भनेर उम्किएका देउवाले श्रेष्ठलाइ जगेडामा राखे । देउवाले मन्त्रीबाट निकालेनन तर नवस भनेर संकेत गरे । अनि उनले पदबाट राजीनामा दिए । यसरी देउवाले खानु गाली खाएर पुरानो झयाउले पन्छाए । तर,उनले नयाँ झयाउले किन वोके ? के यस्तै विवादको घर नवोकी देउवा वाच्नै सक्दैनन ? के देउवा र विवाद पर्यायवाची हुन ? मानिसको उपयोग र फाजिलमा राख्न माहिर देउवाले गजेन्द्र हमाललाइ रोज्नुको खास कारण छ । आफनो हितको लागि अरुलाइ प्रयोग गर्न देउवा जति समकालिन नेतामा कोही पनि त्यति चलाख छैन ।
समाज जस्तो छ–नेता उस्तै हुने हुन । दूधमा पानी मिसाउने समाजमा नाफा नखाने वा वदमासी नगर्ने नेता पाउनै सकिन्न । मिलिजुली सरकार वनाइरहेका देउवा कांग्रेसका सभापति पनि हुन । यसहिसावले उनी दुइ कुरा हेरिरहेका छन । एक पुन सभापति हुने र आमनिर्वाचनमा पार्टी जिताएर पुरानो शाख फर्काउने । यसको लागि उनलाइ पार्टी भित्रका सवै गुट देखि शक्तिकेन्द्रसम्म रिझाउनुपरेको छ । वाकेका गजेन्द्र हमाल रोज्नुको धेरै कारण मध्ये एक यहि गुट ब्यवस्थापन पनि हो । तर,उनको प्रत्यक्ष नातासम्वन्ध वर्तमान प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणासंग छ । सांसद नै नभएको मानिस मन्त्री वन्न एकैपटक भ¥याङ्ग चढनु भनेको सानो शक्तिले सम्भव नै छैन ।
अझ रोचक पक्ष त के छ भने जुन दिन उनले मन्त्रीको सपथ खाए सोही दिन लुम्विनी प्रदेश सरकारमा उनका दाजु सुरेन्द्र हमालाइ कांग्रेसले प्रदेश मन्त्रीमा सिफारिश गरेको छ । एकै दिन एकै घरका दुइ जना मन्त्री के सानो पावरले हुन्छ ?
कांग्रेस जस्तो पार्टीको सभापतिले आफनो सन्तानलाइ सक्रिय सदस्य समेत वनाउन नसकेको देशमा एकै दिन दुइ भाइ मन्त्री कसरी सम्भव छ ?
यसको सिधा अर्थ हो न्यायापालिकाले कार्यपालिकालाइ दवावमा पारयो । यसलाइ सोझो भाषामा लेनदेन भन्दा पनि हुन्छ । दुइ दुइ पटक संसदको हत्या गरेर तत्कालिन प्रधनमन्त्री केपी ओलीले जसरी गलत गरे,उसैगरि प्रधानन्यायाधिशले हस्तक्षेप गरेर सरकारमा अंश लिएर महागल्ती गरे । यसलाइ रोक्न नसक्ने गठवन्धन सरकार अर्को महागल्ती गरयो ।
उद्धार, राहत र बजेट व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छः…
ओली सिटाैला ढाेकैमा जम्का भेट,सिटाैलाले भने-स्वागत गर्न वसेकाे
७ कार्तिक १२:२५
शुक्रबारका समाचार : जिपलाइनमा प्रचण्डदेखि पूर्वराजाको चियापान र भीम…
एमालेको देशव्यापी वडा अधिवेशन सम्पन्न
६ कार्तिक २०:२६
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो
६ कार्तिक १५:४६